Kucelwa abashayeli bashayele ngobunono emigwaqeni eseduze nezikole | News24
Thohoyandou - Amaphoyisa aseLimpopo ngoMgqibelo anxuse abashayeli bezimoto ukuba baqikelele uma beshayela emigwaqeni eseduzane nezikole kulandela isigameko sokushona komfundi oshayiswe yimoto ebuhamba ngesivinini esiphezulu eduzane naseThohoyandou.
Amaphoyisa eLimpopo awahambisani nokushayela budedengu, ikakhulukazi ukushayela ngesivinini esiphezulu emigwaqeni ewelwa ngabafundi ukufinyelela ezikoleni nengasezikoleni, kusho uLt-Col Moatshe Ngoepe.
OLUNYE UDABA:Kushone 2 wezingane zisha nomuzi eLimpopo
Lokhu kza ngemuva kwesigameko esenzeke endaweni yaseVuwani okuyindawo eseduze naseThohoyandou, lapho imoto ishayise khona izingane ezithathum, eneminyaka engu-3, en-5 neno-7 ubudala kuTshivhulana Road eduzane naseTshivhumana Primary ngoLwesihlanu.
Amaphoyisa abikelwa ngesikhathi aphuthuma endaweni yaso afica izingane ezitathu zisesimeni esibucayi zilele phansi eceleni nkomgwaqo. Lezi zingane zaphuthunyiswa esibhedlela nge-ambulensi kodwa ngeshwa eneminyaka engu-7 ubudala yashone ifika esibhedlela. Lezi zingane bezifunda kulesi sikole zihlala khona endaweni. Amaphoyisa ayaqhubeka nophenyo.